Bixiyayaashii Ugu Waaweynaa Bishii Koowaad ee Qorshaha Sanduuqa 'Phuket Sandbox'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Bixiyayaashii Ugu Waaweynaa Bishii Koowaad ee Qorshaha Sanduuqa 'Phuket Sandbox'
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Sanduuqa Phuket Sandbox
Waxay ahayd muddo bil ah tan iyo markii la bilaabay nooca dalxiiska ee Phuket Sandbox, tan iyo markaasna, Thailand waxay soo dhaweysay ku dhowaad 10,000 booqdayaal caalami ah.
Qorshaha dalxiiska ee 'Phuket Sandbox' ayaa la bilaabay bishii hore 1-dii Luulyo 2021, kaliya 26 maalmood ka hor.
Tan iyo waqtigaas, waxaa jiray ku dhowaad 10,000 oo dalxiisayaal ah oo u yimid inay soo booqdaan kuwaas oo qorsheynaya inay ku noqdaan si ay ugu raaxeystaan ​​booqashooyinka gobollada kale.
Marka halkee ka timid kuwa ugu kharash gareeya inta ugu badan bishaas furitaanka?
Ka dib markii la bilaabay qorshaha dalxiiska ee 'Phuket Sandbox' July 1, 2021, dalxiisayaal badan oo caalami ah oo tan iyo markii ay ku soo laabteen dalkooda, ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay markale boqortooyada la soo booqdaan qoysaskooda, iyaga oo u sii safraya sidii ay u booqan lahaayeen gobollada kale sida Bangkok iyo Chiang Mai.
Sida laga soo xigtay afhayeenka Xarunta Maamulka COVID-19 Xaaladda Maamulka (CCSA), Dr. Thanakorn Wangboonkongchana, oo ah Xoghayaha Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, kadib sanduuqa 'Phuket Sandbox' bilaabay, ku dhowaad 10,000 oo dalxiisayaal ah ayaa u yimid inay soo booqdaan. 5ta dal ee ugu sareysa booqdayaashu waxay ka kala yimaadeen Mareykanka, Boqortooyada Ingiriiska, Israel, Jarmalka, iyo Faransiiska.